Inona no atao hoe saka? | Noti saka
Inona no atao hoe saka? Fantatsika rehetra izany. Iza koa no mbola nahita ny kely indrindra, ary mety niara-niaina na niara-niaina tamin'ny iray. eFA toetra azy manokana izay mahatonga azy tsy manam-paharoa sy tsy azo tononina intsony, biby azo fantarina amin'ny fahitana azy fotsiny, saingy tsy te hiresaka aminao momba izany aho, fa momba ny saka ho an'ny olona tia an'io feline io.
Ao amin'ny boky veterinera, na dia amin'ity bilaogy ity aza, dia ho hitanao ny fampahalalana rehetra momba ny fivoarany, ny fomba fiainany, ny sakafony ary maro hafa, fa Amin'ity lahatsoratra ity dia ho hitanao ny fahitan'ny olona amintsika izay manaja sy mitia azy ireo ny saka.
Ny saka dia biby mampinono sy mpiompy afaka manova ny fiainam-pianakaviana iray manontolo manomboka amin'ny minitra voalohany dia ao an-trano ianao. Volom-borona izy ary manaja hatramin'ny fanajan'olombelona azy. Amin'io lafiny io dia azo lazaina fa manana zavatra itoviana betsaka isika satria handray izay omentsika. Misy fehezan-teny iray maneho taratra izany tsara, toy izao:
Asa sarotra tokoa ny mahazo ny fitiavana saka; Ho namanao izy raha mahatsapa fa mendrika ny finamanana izy fa tsy ny andevo.
Tsy azonao atao ny manery azy hanao zavatra tsy tiany. Ary tsy izany koa, raha ny marina. Raha maniry ny fisakaizan'ny saka ianao dia tsy maintsy tsapanao fa mila manokana ampahany amin'ny fotoananao ianao mahatakatra ny fitenin'izy ireo ary ny fombany.
Ny saka dia hahita anao ho saka »be». Izany no antony, raha tena mahazo aina miaraka aminao izy, dia afaka mitondra fanomezana ho anao (na «zavatra nangalarina» avy tany an-trano izany na biby nihazaza tany ivelany) ary mitondra anao ho mitovy.
Tsy azonao antenaina ho tia anao izy raha tsy mikarakara azy araka ny tokony ho izy. Raha tsy miaraka aminy isan'andro ianao, raha tsy manome azy fitiavana, ary raha tsy manahy ny hanome azy sakafo, rano ary ny sain'ny veterinary ianao dia tsy ho faly izy.
Inona no atao hoe saka? Saka izao ...:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Saka saka » saka » curiosities » Inona no atao hoe saka?
Inona no fitsaboana ny sohika amin'ny saka lehibe?
Fa maninona ny saka no mitomany amin'ny alina?